“Laba Jeer Ayuu Wadne Xanuun Igu Dhici Gaadhay” – Ljungberg Oo Si Layaab Leh U Hadlay Kaddib Kulankii Norwich Iyo Arsenal - Jigjiga Online
HomeCiyaaraha“Laba Jeer Ayuu Wadne Xanuun Igu Dhici Gaadhay” – Ljungberg Oo Si Layaab Leh U Hadlay Kaddib Kulankii Norwich Iyo Arsenal
Tababaraha ku-meelgaadhka ah ee Arsenal, Freddie Ljungberg ayaa ka hadlay natiijadii kooxdiisu ka heshay kulankii Norwich City ee uu ku furtay waayihiisa tababarenimo ee Gunners.
Ljungberg oo shaqada ka beddelay Unai Emery oo toddobaadkii hore laga eryey shaqada, ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo ay barbarro la galeen Norwich ay haddana kooxdiisu si fiican u ciyaartay, maamulka garoonkana gacanta ku hayeen.
Tababaraha ku-meelgaadhka ah waxa uu amaan usoo jeediyey weeraryahanka Aubameyang ee dhibicda kaliya u badbaadiyey kooxdiisa, waxaanu ku tilmaamay in uu maskax xooggan la yimid markii uu dhalinayey rikoodhaha dambe isagoo mid hore khasaariyey.
Wariye ka tirsan Sky Sports oo weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa intii ay ciyaartu socotay, ayaa waxa uu si kaftan ah u qirtay in laba jeer uu wadne-xanuun ku dhici gaadhay.
“Laba jeer ayaan u maleeyey in wadne-xanuun igu dhacay. Laakiin haddana waxaan maqlay wax kale, taasina waa waxa natiijooyinku keenaan.”Ayuu yidhi Ljungberg.
Intaa kaddib waxa uu amaanay Aubameyang, sidoo kalena waxa uu si guud uga hadlay qaab ciyaareedkii kooxdiisa, wixii uu ka filanayey iyo waxyaabihii niyad-jabiyey ee uu ciyaarta gudaheeda ku arkay, waxaanu yidhi: “Shayga ugu muhiimsan wuxuu ahaa in Aubameyyang uu la yimid maskax xooggan oo uu ku dhaliyey rikoodhihii labaad kaddib markii uu kii hore khasaariyey.
Ciyaarta si fiican ayaanu ku bilownay, waxayna ahayd sidii aanu rabnay inaanu u ciyaarno, laakiin waxaanu u baahanay inaanu u shaqayno sidii marxalad kala-guur ah, ciyaarta anaga ayaa maamulaynay, balse si fudud ayay noo jabiyeen.
Bilowgii ciyaarta waxaan arkay waxyaabo badan oo aanu tababarkii kaga soo shaqaynay, laakiin waxaanu u baahanahay inaanu goolal dhalino, hoggaankana qabano.
Waxa aan rabaa in kooxdu ay si fiican u shaqayso, waxa kaliya ee lagu xisaabtamayaana waa guusha. Waxaan doonayey in aan badiyo kulamada, markaa waan niyad-jabsanahay laakiin haddana waxaan arkayaa waxyaabo badan oo yididiilo i gelinaya.”